အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ နန်းအမရာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်‌လေးများ…….. – Shwe Naung
အတွင်းသားလေးတွေ မြင်သာအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ နန်းအမရာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်‌လေးများ……..
N N | November 5, 2021 | Celebrity | No Comments
မော်ဒယ်လ် နန်းအမရာ က တော့ ယခု မှာ ဆွဲဆောင် မှု ရှိ တဲ့ ကိုယ်လုံ လေး ကို လှုပ်ရမ်းကာ အကြမ်းစား ကပြ ထား တဲ့ Tik Tok လေးကို ချပြ လာ ခဲ့ပါ တယ်။
သူမ ရဲ့ ကြွေလောက် စရာ ကောင်း တဲ့ Tik Tok လေး ဟာ ပရိသတ် တွေ ကို အချစ်တွေ ပိုစေ ခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ချစ် ပရိသတ် တွေ အတွက် မော်ဒယ်လ် နန်းအမရာ ရဲ့ အမိုက်စား Tiktok လေး ကို ပြန်လည် ဖော် ပြ ပေးလိုက် ရ ပါ တယ်။
နန်းအမရာ ဟာ အနု ပညာ လောက မှာ နေရာ တစ် ခု ကို ရယူ ထား နိုင် ပြီး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှု ကို အခိုင် အမာ ရယူ ထား နိုင်တဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဆွဲဆောင် မှု ရှိပြီး အချိုး အစား ပြေ ပြစ် တဲ့ အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့ သူမ ကတော့ ရင်ခုန် စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံရိပ် လေး တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက် တင်ပေး လေ့ ရှိ သူလေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ရင်ထဲ မှာ နေရာ တစ်ခု ကို ရယူ ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ သူမ ကတော့ အထာ ကျ ကျ ဆော့ကစား ထား တဲ့ Tiktok လေး တွေကို လည်း လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာထက် တင်ပေး လေ့ရှိ ပြီး အဆိုပါ Tiktol လေးတွေ ဟာ လူကြိုက် များလျက် ရှိပါ တယ်။
သူမ ကတော့ မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှု ရော ယောကျာ်းလေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှု ကို ပါ အခိုင် အမာ ရယူ ထားနိုင် ခဲ့ တဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် နော်။
ကမ်း‌ခြေမှာ ဂါဝန်လေးနဲ့ အထာကျကျ ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိနေတဲ့ ဆွေဇင်ထက်ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ………….
ဖွေးဥနုနေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ ရွှေမဘုံရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး……..
New Hair……….Who’s this ဆိုတဲ့ captionလေးနဲ့ အတူ အရမ်းကို ချစ်စရာ ကောင်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးများ ဝေမျှ လာတဲ့ ရွှေကစ်လေး………..
ညို့အားပြင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အရမ်းကို လှရက် လွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……..
ဖက်ရှင် အလန်းစားလေးနဲ့ အထာကျကျ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ M ဆိုင်းလု ရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ……….
အင်္ကျီ ပါးပါးလေးနဲ့ အတွင်းသား လေးတွေ အထင်းသား မြင်နေရတဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ အကိတ် ပုံရိပ်လေးများ………..
အတွင်းသား လေးတွေ မြင်အောင် မပေါ်တပေါ် ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ…………
အလန်းစား ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ………….